HomeWararka Ciyaaraha MaantaMaxaa ku soo kordhay: Manchester United iyo Wararka Suuqa kala iibsiga ee Bisha January
January 19, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Ingiriiska, Maxaa ku soo kordhay, Suuqa kala iibsiga 0
Maxaa ku so kordhay Manchester United
Suuqa kala iibsiga bisha Janaayo ayaa haatan furan, iyadoo Manchester United ay weli xiriir la leedahay magacyo waa weyn oo suuqa ku jira.
Red Devils ayaa durbaba heshiis la gaartay Amad Traore, waxaana laga yaabaa inay xoojiso safkeeda si ay ugu sii xoojiso qeybtii hore ee xilli ciyaareedka.
Erling Braut Haaland ayaana wali jira liiska kooxda Manchester United iyadoo saacad walbo ay dhici karaan heshiisyo leesku fahmi karo iyadoo aabaha dhalay xidigan uu sheegay in uu jiro xiriirka United ee Wiilkiisa
Borussia Dortmund ayaa lagu soo waramayaa inay rajeyneyso inay dalabyo ka hesho bartilmaameedka Manchester United Jadon Sancho ka hor xagaaga suuqa kala iibsiga.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka England ayaa ku dhibtooday qaab ciyaareedkiisa bilowgii ololaha, laakiin haatan wuxuu bilaabay inuu ku garaaco shabaqa sare lix gool iyo 11 caawin dhammaan tartamada.
Sancho ayaa dhawaan cadeeyay inuu kaliya diirada saarayo Dortmund inkasta oo ay jiraan warar la isla dhexmarayo oo ku saabsan mustaqbalkiisa, saxafiga reer Jarmal ee Raphael Honigstein ayaa aaminsan in United ay dhab ahaantii u dhaqaaqi doonto weeraryahanka markale xagaaga.
Manchester United ayaa weli kalsooni ku qabta in Donny van de Beek uu ku guuleysan doono Old Trafford, sida laga soo xigtay Edwin van der Sar.
United ayaa xagaagii la soo wareegtay Van de Beek oo si aad ah loo qiimeeyo iyadoo lagu qiimeeyay qiimo jaban oo ah 35.1 milyan ginni.
Xiddiga reer Holland ayaa ku soo bilowday bilowgii ugu xumaa noloshiisa magaalada Manchester, inkasta oo uu kaliya laba kulan ku soo bilowday Premier League iyo sideed kulan oo kale oo badal ku soo galay ilaa haatan.
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay qarash gareyn doonto lacag badan si ay ula soo saxiixato Robin Le Normand oo ka socda Real Sociedad. Kooxda Ole Gunnar Solskjaer ayaa sii xajisatay hogaanka horyaalka Premier League usbuucaan ka dib markii ay dagaal adag 0-0 la galeen kooxda difaacaneysa horyaalka ee Liverpool.
Rio Ferdinand ayaa aaminsan in Ole Gunnar Solskjaer uu rajeynayo inuu saameyn deg deg ah kala kulmo Amad Diallo kooxda Manchester United.
Alexis Sanchez, Romelu Lukaku, Ashley Young, ayaa dhamaan ka tagay Manchester United iyagoo iska xaadiriyay Inter Milan Xidiga. Jesse Lingard ayaana ku xiga?
ESPN ayaa soo jeedineysa in Inter Milan ay la soo saxiixan karto ciyaaryahan kale oo United ah iyadoo u dhaqaaqeysa ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer England bishaan.
Kooxda Ayaa ku soo qaadanaa qeybta xigta Hoos ku qor